Natomboka ny herinandro lasa teo, ny asan’ny « consultant » nalaina hanatontosa ny PRD na Plan Régional de Développement, hamaritra ny vinan’asa rehetra hotanterahin’ny Faritra Atsinanana ny 2020 – 2023.
Vina izay mifanindran-dàlana amin’ny Vinan’ny fitondram-panjakana, izay voarakitra ao anatin’ny PGE sy ny PEM ary ny ODD.
Fomba fiasa manaja ny TRANSVERSALITE, INCLUSIVITE METHODE PARTICIPATIVE… izany hoe ireo fomba rehetra hampandraisana anjara ireo mpisehatra amin’ny asa fampandrosoana, ity ekipan’ny Cabinet CONFORME (Conseil – Formation – Etudes) ity.
Vinavinaina fa alohan’ny faran’ny taona 2020, dia vonona ity PRD Atsinanana ity, izay sady Drafi-panajariana hiasana mivantana no fitaovana entina handresy lahatra ireo mpiara-miombon’antoka rehetra afaka hatonina.
Nasaina tamin’izao fivoriana fanolorana izao, ireo Fitaleavana sy ny Sampan-draharaha rehetra eto Toamasina, indrindra koa fa ny Olom-boafidy sy Solombavam-bahoaka ary ny ekipan’ny Faritra Atsinanana.
Hitety azy ireo ny ekipan’ny « consultants », alohan’ny hitetezan’izy ireo ny Distrika 07 ato anatin’ny Faritra Atsinanana.